अस्ट्रेलिया कान्डको बास्तबिकता के हो त? हेर्नुहोस पूरा जानकारी (भिडियो सहित)
यो हप्ता नयाँ कान्डा “अष्ट्रेलिया कान्डा” केन्द्रित छ। धेरै व्यक्ति यस केसको वास्तविकता र अस्तित्वको बारेमा जान्न उत्सुक छन्। समाजिक सन्झाल हरुमा यस्को बारेमा अहिले निकै नै चर्चा भैरहेको भेटिएको छ ! यो7मिनेट २ सेकेन्डको भिडियो क्लिप बाहेक केहि होइन जहाँ एक दम्पतीलाई यो-न सम्प्रक गर्दै पाइएको छ।
यो निजी सेक*स भिडियो क्लिप फुटेज मात्रै हो । भिडियोमा मानिस र केटी दुबै अङ्ग्रेजी भाषा बोल्छन् तर मान्छे मानिलिन्छन् कि केटी अष्ट्रेलियाली होइन तर नेपाली नागरिक हो। यद्यपि युवती नेपाली नागरिक हुन् भनेर कुनै ठोकुवा गर्ने कुनै आधार छैन ।
मानिसहरुले उक्त युवतिको तस्विर को ट्रोल बनाइरहेका छन् । जसको भाव छ । अष्ट्रेलियामा रहेकी छोरीलाइ नेपालबाट आमाले फोन गर्दै सोध्छिन् । छोरी के गर्दै छौं । उताबाट छोरी भन्छिन् मामु जापान काण्डलाई Flop पारिसके ।
Gepostet von Ktm Dainik am Dienstag, 21. Januar 2020
सार्वजनिक भएको भिडियोमा देखिने युवा पाकिस्तानी भएको र युवती नेपाली भएको भन्दै यो भिडियो प्राइभेट च्याट ग्रुपमा भाइरल भैरहेको छ ।
विभिन्न आसनहरु प्रयोग गर्दै यी दुवै जोडीले यौ-न सम्पर्क गरेको भिडियो हो ।
भिडियो बिभिन्न सार्वजनिक प्लेटफर्महरू मार्फत भाइरल भएको छ। यो-न सम्प्रक गर्नु प्रत्येक जीवित जीवको आधारभूत आवश्यकता हो। यो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक जीव को स्वास्थ्य मा ठूलो प्रभाव छ।
यो-न सम्प्रक गर्नुका धेरै स्वास्थ्य लाभहरू छन् भन्ने तथ्य पनि चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ। आईटीले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन्छ, यसले चयापचय दर बढाउँछ! यसले एक जोडीको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदछ, यसले दम्पतीबीच विश्वास र उचित सम्बन्ध सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यसबाहेक, यसले कोर्टिसोल हार्मोन र तनाव (तनाव) हर्मोन कम गर्दछ। शरीर शारीरिक र मानसिक स्वस्थ हुनेछ। तर मानव अस्तित्व को निजी मा यो कुरा बनाएको छ।
भिडियाे यहाँबाट हेर्नुहाेस ।